दाङमा एयरपोर्ट: विकल्प होइन व्यवस्थापन - Tulsipur Online
दाङमा एयरपोर्ट: विकल्प होइन व्यवस्थापन
Posted by Admin | २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार १५:५६ |
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाले टरिगाउँ एयरपोर्ट सञ्चालनको अनेक प्रयास ग¥यो । निर्वाचित भए लगत्तै नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले विमान सेवासँग सम्वन्धित सबै मन्त्री र अधिकारीहरुसँग भेटघाट गरे ।
साविक राप्ती अञ्चलको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको तुलसीपुरको एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि सबैतिरबाट सकारात्मक जवाफ आएपनि कार्यान्वयनमा त्यसले कुनै पनि काम गरेन । अन्ततः वन्दप्रायः अवस्थामा रहेको एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिका नै जिम्मेवार वनेर समिट एयरको जहाज टरिगाउँ विमानस्थलमा अवतरण ग¥यो ।
समिट एयरको जहाजले तुलसीपुरको विमानस्थल छोएको दिन अर्थात पुस २३ गते बाजागाजाका साथमा जहाजको स्वागत गरियो । दाङ्गका माननीयहरु समेत जहाजबाट ओर्लिएर निरन्तरताका लागि पहल गर्ने उद्घोष गरे । जहाज आउने दिन तुलसीपुरका मानिसहरुको ‘मिनी मेला’ नै लागेको थियो । विमानस्थलमा भिड हुनुको कारण विमान हेर्नु थिएन , स्थानीय तहले विमान सञ्चालन गरेको खुसीमा उत्साह थप्नुमात्रै थियो । अहिले सम्झन्छु, घोराहीबाट नगन्य मात्रै उपस्थित थिए खुसीमा खुसी मिलाउनका लागि । तुलसीपुरमा एयरपोर्ट सञ्चालन हुनुको अर्थ यो थिएन कि, तुलसीपुरबासीले मात्रै यसबाट फाइदा लिन पाउने थिए ।
तर विडम्वना सानो भुगोललाई पनि विखन्डनकारी मानसिकताले कहिल्यै छोडेन फलतः तुलसीपुरमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि यसका छिमेकी निकायहरुले साझेदार गर्ने आँट देखाएनन् । तुलसीपुर विमानस्थलका लागि तुलसीपुर एक्लै लड्यो । चाहे उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दा होस् चाहे उद्योग वाणिज्य संघले नै किन नहोस् । भर्खरै सार्वजनिक भएको वजेटमा तुलसीपुर एयरपोर्टको विकल्प खोज्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेको एयरपोर्टलाई अवमुल्यन गरेर नयाँ एयरपोर्टको विकल्प खोजिनुलाई कसरी भेगिय विभेद नमान्न सकिन्छ र ? नयाँ एयरपोर्ट भन्ने वित्तिकै चर्चामा रहेको नारायणपुर खैराको कुरा नै हो । सामान्य विवेक प्रयोग गरेपनि यो कुरा वुझ्न गाह्रो पर्दैन । हो, अहिलेको सन्दर्भमा तुलसीपुर एयरपोर्ट सञ्चालन गर्दा अवश्य पनि केही समस्याहरु रहेका छन् । यसको धावनमार्ग सानो हुनुका साथै ठुला विमानका लागि पनि पनि उपयुक्त छैन ।
तर यसलाई विस्तार र विकास गर्ने आधारहरु पनि निकै वलिया छन् । चालु अवस्थामा रहेको एयरपोर्टको व्यवस्थापन नगरेर नयाँ नयाँ एयरपोर्टको विकल्प खोज्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौ ? सवैले मनन गर्नुपर्ने वेला भएको छ । सवाल तुलसीपुर र घोराहीको होइन सवाल न्यायको पनि हो । तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थल सञ्चालन नगरेर नयाँ विकल्प खोज्ने हो भने तुलसीपुरबासी माथिको यो ठूलो अन्याय हुन जान्छ ।
विस २०१२ सालबाट सञ्चालनमा रहेका टरिगाउँ एयरपोर्टको भविष्य राजनीतिक तवरबाट अन्यौलमा पारेपनि जनताले भने यसका निम्ति लडाइ लड्न भएपनि पछि पर्नु हुँदैन । साँघुरो दलिय मानसिकताले हामीलाई भोलि कहाँ पु¥याउछ ? एकपटक मनन गर्नु आवश्यक छ । आपसी खिचातानीमा लागेर प्राप्त भएको कुरालाई पनि गुमाउनु हाम्रो नियती नवनोस् भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा तुलसीपुर अञ्चल अस्पताल सञ्चालनका हुन लाग्दा घोराहीबाट विरोध भएर तुलसीपुरमा नाम मात्रको अञ्चल अस्पताल स्थापना गरेका उदाहरण हाम्रा आँखा वरिपरी रहेका छन् ।
तुलसीपुर अञ्चलको सदरमुकाम भएपनि कार्यकारी हिसाबले जिल्लाकै महत्व हुने भएकाले जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरु पनि सबै घोराहीमा हुनुले पनि भौगोलिक हिसाबले अञ्चलको केन्द्रमा परेर पनि तुलसीपुरको विकास घोराहीको भन्दा निकै कम देखिन्छ । तुलसीपुर र घोराहीको विकासको गतिलाई नियाल्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा घोराहीको विकास धेरै अगाडि छ ।
तर विडम्वना तुलसीपुरले विकास गर्नुको साटो भएको संरचना समेत गुमाउने अवस्था आउनु भनेको आफैमा दुःख लाग्दो कुरा हो । उपमहानगरपालिकाले एयरपोर्ट नियमित सञ्चालनका लागि पहल गर्दा गर्दै पनि आखिरमा विमानसेवा वन्द हुने सम्मको अवस्था सृजना भयो । यो सँगसँगै तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थलको पनि विकल्प खोज्नु भनेको आफैमा दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । नयाँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि अझै १० वर्ष सम्मको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने भएको एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्न एक वर्षमै सकिन्छ ।
दाङ्ग जिल्लाबाट हेभिवेट नेताहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हेभि तवरले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर विडम्वना प्रतिनिधित्व गर्नेहरु भुगोलका दृष्टिले. घोराहीको सन्निकट मानिन्छन् । अझ त्यसमा पनि घोराहीलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुले राजनीति गरिरहेका छन् । नेता र नेतृत्वले कहिल्यै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हेनुै हुँदैन । बहुसंख्यक जनताको चाहना र वास्तवितकतालाई वोध गर्नुपर्दछ ।
तुलसीपुर विमानस्थलको विकल्प खोजिनु भनेको यहाँको विमानस्थल वन्द गराउने सोच नै हो । यति सानो भुगोलमा पक्कै पनि दुईवटा एयरपोर्ट सम्भव कुरा होइन । हामी विकासको चरणमा छौ । सिमित स्रोत र साधनबाट हामीले छोटो समयमा धेरै समृद्धि हासिल गर्नु छ । यसका लागि वैज्ञानिक विकासको सिद्धान्तलाई अबलम्वन गर्नु नै वलियो आधार हो । भएको एयरपोर्टलाई थप विस्तार गर्नका लागि अवश्य पनि सानो रकमले सम्भव हुन्छ । तर नयाँ वनाउँदा आर्थिक लगानी सोही अनुसार लाग्ने गर्दछ । यहाँको विकासका लागि अन्य कुराहरु पनि धेरै छन् जहाँ नयाँ एयरपोर्ट वनाउने लगानीलाई रकमान्तरण गर्न सकिन्छ ।
त्रले मात्रै यसको पहल ग¥यो । ठेक्कामा नपुगेका यात्रुहरुको पैसा पु¥याइदिने सर्तमा सञ्चालन भएको विमानसेवाले कहिल्यै पनि लामो समयसम्म सञ्चालन हुने अवसर पाएन । पछिल्लो पटक स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको विमानसेवा निरन्तर हुन्छ की भन्ने अपेक्षा यहाँका जनताले गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले पनि कर्मचारी खटाएर सातामा दुइपटक विमानसेवा नियमित गराइरहेको थियो । तर विमान कम्पनीले अन्य ठाउँबाट धेरै मुनाफा आउने भएपछि विस्तारै यहाँबाट हात झिकेको पाइन्छ । पछिल्लो समय आधिकारीक रुपमा विमान सेवा वन्द नभएको भएपनि सञ्चालन हुने आधारहरु भने कमजोर हुँदै गएका छन् ।
तुलसीपुरमा विमानस्थल सञ्चालनमा लागि यहाँका जनताले निकै प्रयास गरे । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सव लगाएर धावन मार्ग कालोपत्रे समेत ग¥यो । तर सिमित समयका लागि मात्रै विमान सेवा सञ्चालन भयो । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै हो । अव पनि पहल गर्न सकिएन भने तुलसीपुर सधैका लागि पछाडि पर्ने छ ।
हामीले गर्व गर्ने उच्च अदालत र प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि प्रदेश राजधानीको छिनोफानो भएपछि यहाँ रहने छैनन् । भएका कुरालाई रोक्न सकिएन भने नयाँ काम गरेर केही पनि हुनेवाला छैन । राजनीतिक प्रतिशोध र वैचारिक मतभेदलाई मिल्काएर हामीले तुलसीपुरको एकिकृत विकासका लागि केही गर्न सकेनौ भने पछुताउनुको विकल्प वाहेक केही पनि हुनेवाला छैन ।
Previousकामना सेवा विकास बैंक लि.को ५१ औँ शाखा तुलसीपुरमा
Next२५ वर्षसम्म पनि रक्षाचौर–घोराही सडक खण्ड जस्ताको त्यस्तै